Arzantina: Nilahatra Ireo Mpianatra Hitakiana Sekoly Manara-penitra Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2017 21:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, عربي, Français, فارسی, English
(Marihina fa tamin'ny 8 Jolay 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ao amin'ny faritanin'i Rio Negro akaikin'ny tanàndehiben'i General Roca, nangataka ny governemanta mba hanatanteraka ny fampanantenany sy hamaha ny olana misy ao amin'ny sekoly ny mpianatra ao amin'ny lisea laharana faha 106. Manaporofo ny zavatra takian'izy ireo ny lahatsary mampiseho ny fantsona fanariana rano maloto manoloana ny sekoly, ny efitrano fianarana miisa 3 izay natao ho an'ny mpianatra maherin'ny 240 ary ny loto avy amin'ny trano fivoahana izay mitobaka eny an-tokontanim-pianarana. Na dia teo aza ny fampanantenana avy amin'ny governemanta tamin'ny volana Jona farany mba hamahana ireo olana ireo dia tsy nisy ny fiovana, izay nahatonga ireo mpianatra hitandahatra teo ivelan'ny biraom-paritry ny Fampianarana ambanivohitra .
Mitantara ny zava-misy mitovy ny fanazavana sy ny dikantenin'ny lahatsary [es] izay nalain'ny emilioris tao amin'ny tranonkala CorteDirecto: nitandahatra manoloana ny biraom-paritry ny Delegasionan'ny fampianarana any amin'ny faritra ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ao amin'ny lisea laharana faha 106 , any amin'ny faritra ambanivohitr'i General Roca. Tsiahivina anefa fa nandà ny hiasa ao an-toerana ireo mpampianatra nanomboka tamin'ny 11 Jona 2008 raha tsy tanteraka ny fampanantenan'ny CPE tato anatin'ny taona maromaro amin'ny fanombohana ny fanitarana ny toeram-pianarana. Tsy manana afatsy efitra 3 ho an'ny mpianatra miisa 240 ny lisea amin'izao fotoana izao .
Nisy ihany koa ireo mpianatra no nandeha manodidina ny toeram-pianarana ary naka ity lahatsary ity [es] : hita ao ny làlana mamotaka, ny rano maloto, ny mpianatra manatrika fampianarana eny an-dalantsara, ny lakozia kely izay andrahoana ny ronono tsindri-tsakafo ho an'ny mpianatra, ny efitrano foana, ary ny faritra aoriana fanaovan'izy ireo fanabeazana ara-batana izay tondraka lavaka fanariana maloto.
Mampiseho ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ireo mpianatra tamin'ny fibodoana ny sekoly ity lahatsary manaraka ity [es] mba hanehoana ny tsy hafaliana'izy ireo manoloana ny fitantanana ny faritra izay tsy miraharaha ny zava-misy manjo azy ireo. Raha nanontaniana ny mpianatra iray raha toa ka tsy manapaka ny fianarana ny fibodoana ny sekoly dia nilaza izy fa efa maro ny ora tsy nahafahan'izy ireo nianatra noho ny fikatsoan'ny milina fandefasana hafanana, ny tsy jiro tsy mandeha, ny tondra-drano ary ny tsy fahampian'ny ny efitrano fianarana.